Skagen, lapho iNorth Sea ihlangana neBaltic | Izindaba Zokuhamba
UMonica sanchez | | Denmark, Iziqondiso, travel
Kuwo wonke umhlaba singathola izimangaliso zemvelo ezisishiya sishaqekile, nemilomo yethu ivulekile kakhulu ngokumangala nezinhliziyo zethu zigcwele ukukhohlisa. Nomaphi lapho sibheka khona kunezindawo zeparadesi lapho ukunqamula kusuka esimisweni kulula njengoku vala uvule amehlo akho.
Enye yalezi zindawo ezibonakala zithathwe endabeni yidolobha lezivakashi lase Skagen. Kutholakala engxenyeni esenyakatho kakhulu yezwekazi laseDenmark, kuzungezwe amabhishi anesihlabathi angenalutho lokufisela umona labo basezifundeni ezishisayo, njengoba ligezwa ngamanzi olwandle amabili: iNorth Sea neBaltic, ehlangana nokuvusa umbukiso omangalisayo.
Sengathi abangani ababili abaxhawulana ngaphandle kokuyicindezela ngokuqinile, futhiLezi zilwandle ezimbili zihlala ngokuvumelana okuphelele ngaphandle kokuphazanyisana.
1 Skagen, idolobha elihle kakhulu laseDenmark ongeke uliphuthe
2 Yini okufanele uyenze eSkagen?
3 Isimo Sezulu Skagen
4 ISkagen, lapho kuhlangana khona izilwandle ezimbili ... kepha azihlangani
5 Kwenzeka kanjani "ukungqubuzana kwezilwandle"?
6 Izinto okufanele wazi ngaphambi kokuya eSkagen
Skagen, idolobha elihle kakhulu laseDenmark ongeke uliphuthe
Ungaya kuphela ukuwubona kulo muzi, kusuka Skagen. Itholakala enyakatho yeDenmark, ikakhulukazi esifundeni saseNyakatho Jutland. Yidolobha elincane lokudoba elamukela ngomusa noma ngubani ofisa ukulivakashela.
Kuze kube kungekudala bekungekho bantu abaningi, kepha kancane kancane inani labantu belilokhu landa, ikakhulukazi eminyakeni yamuva, ngoba uma usibona lesi simanga esincane ngamehlo akho, ungabe usakukhohlwa.
Yini okufanele uyenze eSkagen?
Ngaphandle kwendawo yayo ephelele, inganikela kakhulu kubavakashi, ngaphandle kokuthanda kwabo. Ngokwesibonelo:
Umnyuziyamu weSkagen: Uma uthanda ukubona ubuciko obudwetshwe emdwebeni, awukwazi ukuphuthelwa umnyuziyamu. Yasungulwa e1908 eBrøndum Hotel. Njengamanje ihlala ngaphezu kuka-1950 isebenza ngabadwebi abahlukene, njengo-Anna Ancher noma uChristian Krohg.
Isikhumulo: indawo enhle yokuthola izinhlanzi ezintsha, njengoba bezithengisa nsuku zonke. Ungahlala futhi kwenye yezindlu zayo, ezipendwe ngombala ophuzi.
I-Råbjerg Mile: ezindaweni ezizungeze idolobha kunamabhishi esihlabathi amhlophe namanzi acishe abe ngekristallini. Leli yipharadesi lapho wonke umndeni ungajabulela ukuhamba okumnandi, noma ucabange ngeRåbjerg Mile, eyaziwa kangcono njengendunduma ehambahambayo.
ICape Skagen: Kepha uma ukhetha ukubona izinyoni ezidla inyama zenza lokho ezikwenza kahle kakhulu, kufanele uhambe ekugcineni. Amaphuzu amahle we-vantage kunzima ukuwathola, kepha lapha uzothola elilodwa: i-Skagens Odde.
Isimo Sezulu Skagen
Lapho uya endaweni ongayijwayele enye yezinto zokuqala okufanele ukwenze ukwazi ukuthi isimo sezulu sizobe sinjani lapho sishaya phansi. E-Skagen amazinga okushisa aphakathi kuka -2ºC ngoFebhuwari kanye no-18ºC ngo-Agasti, ngakho-ke, Akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokuthatha izingubo ezifudumele ukuzivikela emakhazeni, kanye nezinye izambulela ikakhulukazi uma uya ngo-Okthoba okuyinyanga enamandla kakhulu.
ISkagen, lapho kuhlangana khona izilwandle ezimbili ... kepha azihlangani
Ngaphandle kokungabaza, iyona eheha kakhulu le ngxenye yomhlaba. I- ISkagerrak Strait ingumugqa obanzi ohlukanisa iningizimu yenhlonhlo yaseScandinavia (eNorway) nenhlonhlo yaseJutland (eDenmark), oxhumanisa neNorth Sea neBaltic Sea. Yindawo yomlando eshiye uphawu lwayo: ngobude obungu-240km futhi cishe ngama-80km ububanzi, kwakuyindawo ekahle phakathi nezimpi zomhlaba ezimbili, ikakhulukazi eJalimane, ngoba kwakungesinye sezizathu esenza amaNazi ahlasela iDenmark neNorway.
Kwenzeka kanjani "ukungqubuzana kwezilwandle"?
"Ukungqubuzana kwezilwandle" kwenzeka lapho omunye walaba ababili enosawoti omncane kakhulu kunenye. Kulokhu, iBaltic inokuhlushwa kasawoti okuphansi kuneNorth Sea, emnandi kakhulu ngenxa yamanzi amaningi ahlanzekile ahlinzekwa njalo yimifula egelezela osebeni lwayo.
Empeleni, ukube bekungengenxa yalowo mnyango omncane oLwandle OluseNyakatho, obizwa ngeSkagerrak, iBaltic kungaba yichibi elikhulu lamanzi angenasawoti.
Izinto okufanele wazi ngaphambi kokuya eSkagen
Njengoba sibonile, iSkagen yidolobha elibanda kakhulu kepha linamathuba amaningi okusenza sibe neholide esingenakulilibala. Kodwa-ke, kufanele sicabangele izinto eziningi uma sifuna ukuthi uhambo lwethu luhambe njengoba besicabanga ... okungenani. Bhala phansi lawa macebiso ukuze ungaphuthelwa yilutho:
Ukuhamba kusuka ngoMeyi kuya kuSepthemba: Ngalezo zinyanga uzothola zonke izivakashi zivulekele umphakathi.
Faka isicelo se-European Health Card (TSE)Ngokusobala, asilindeli ukuthi sizogcina ngokulimala noma yini efana naleyo, kepha uma kungenzeka ukuthi kungcono ukuyicela ngenxa yalokho okungenzeka.
Thatha isichazamazwi nomhumushi: ulimi oluzenzakalelayo abalukhulumayo isiDanish, yize iziqondisi zokuvakasha nazo zikhuluma isiNgisi. Uma ungazazi kahle izilimi, isichazamazwi nomhumushi kungasiza kakhulu.
Shintsha ama-euro ngemali yasendaweni (i-Danish krone): kwezinye izindawo bazokwamukela ama-euro, kodwa kungcono ukungazifaki engozini futhi uthenge ngemali yendawo noma ngekhadi lesikweletu.
Yenza ikhamera yakho ihlale ilungile: Ukulondoloza izinkumbulo zakho nokuzikhumbuza kaninginingi lapho ubuyela ekhaya, lungiselela ikhamera yakho ukusetshenziswa.
Ngakho-ke manje uyazi ukuthi ungayibeka kuphi inkambo yohambo lwakho olulandelayo: Skagen, Denmark.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Denmark » Lapho iNorth Sea ihlangana neBaltic